Tilmaamaha Noocyada iyo Qalabyada lagu Bilaabayo Abuuritaanka Koorsooyinka Fiidiyowga ee Internetka | Martech Zone
Tilmaamaha Noocyada iyo Qalabka Lagu Bilaabo Abuuritaanka Koorsooyinka Fiidiyowga ee Internetka ah
Axad, Abriil 11, 2021 Isniin, April 12, 2021 Hritusharma
Haddii aad rabto inaad sameyso cashar toos ah ama koorso fiidiyow ah oo aad ubaahantahay liistada gacanta ee dhammaan aaladaha iyo istaraatiijiyadaha ugu fiican, markaa waad jeclaan doontaa hagahan kama dambaysta ah. Dhowrkii bilood ee la soo dhaafay, shaqsiyan waxaan baaray oo tijaabiyey qalab badan, qalab iyo talooyin si loo abuuro casharro guuleysta iyo koorsooyin fiidiyow ah oo lagu iibiyo internetka. Oo hadda waad kala shaandheyn kartaa liiskan si aad si dhakhso leh u hesho waxa aad u baahan tahay inta badan (waxaa jira wax loogu talagalay dhammaan miisaaniyadaha) isla markiiba waad ku deg degtaa inaad soo saarto koorsadaada xigta
U fiirso, kubiloow mida ugu dhiiri galinta badan oo aqriso maxaa yeelay waxaan kuu diyaariyey wax runtii adiga qaas kuu ah, waxaana rabaa inaan hubiyo inaadan u seegin sabab kasta ha noqotee.
Diiwaanka Koorsada Fiidiyowga ee Khadka Tooska ah
Nooca ugu horeeya ee fiidiyowga ah ee aad ubaahantahay inaad usameysato koorsadaada ama casharkaaga waa inaad muujiso waxaad ku aragto shaashadda kumbuyuutarkaaga (bogagga, barnaamijyada ama bogagga internetka) oo aad uga faallooto adigoo maqal ah. Farsamo ahaan taasi waa waxa ubaahan maalgashi yar, laakiin halista ayaa ah hadii aad sameyso sida dadka intiisa badan aan ku arko YouTube-ka, waxaad aakhirka abuureysaa fiidiyowyo caajis badan oo aan cidi daawan doonin.
Tani waa sababta ay muhiim u tahay:
Ka taxaddar garashada bogagga
Wax badan ka shaqee isticmaalka codkaaga
Gali animations iyo saameyn gaar ah
Samee jaritaanno arxan-darro ah oo nasanno ah iyo qaybo aan loo baahnayn
Diiwaanka Screen RecordCast
Ilaa hadda barnaamijka ugu fudud uguna dhameystiran ee loo isticmaalo bilowga. Diiwaanka Screen RecordCast waa mid dareen leh, muuqaal hodan ah, oo 100% xor ah. Wax kasta oo aad isticmaasho PC ama Mac, waad ku xakameyn kartaa kombiyuutarkaaga si wanaagsan maadaama ay shabakad ku saleysan tahay. In kasta oo ay lacag la’aan tahay, waa cajalado-biyo-la'aan, xayeysiis la'aan, iyo qeexitaanno qeexan oo sarreeya. Laguma waayi karo sanduuqaaga qalabka. Intaas waxaa sii dheer, waxay bixisaa fiidiyow oo la dhisay oo leh maktabad hodan ah oo ka kooban walxaha, qoraalka, animations, overlays, transitions, iyo waxyaabo badan oo tafatir ah oo jilicsan sida kala qaybsanaanta, zoom gudaha / dibedda, gooyo, iwm. RecordCast runtii waa ku habboon tahay kuwa doonaya inay abuuraan koorsooyin fiidiyow ah ama casharro fudud.
Saxiix Diiwaan Gal Diiwaan Bilaash Ah
Loom waa mid ku habboon haddii aad rabto inaad abuurto fiidiyowyo deg deg ah, gaar ahaan adigoo faallo ka bixinaya bogagga internetka ama softiweerka. Waxay kuu oggolaaneysaa inaad isqorto naftaada intaad hadlaysid, tilmaam ku siineyso, oo ku tusaya goobaabin xarrago leh oo aad dhigikarto meel kasta oo aad u aragto inay ku habboon tahay. Sidoo kale waxtar badan u leh wadaagista faallooyinka fiidiyowga si dhakhso leh asxaabtaada ama macaamiishaada. Koontada aasaasiga ahi waa bilaash waxayna sidoo kale leeyihiin ganacsi iyo wax soo saar shirkadeed.
Saxeex Lumis Bilaash ah
Haddii aad isticmaasho aaladda Apple, Biyo qulqulaya waa xalka aad u baahan tahay: duubista casharrada waaweyn iyo sameynta fiidiyowga nus-xirfadeed. In kasta oo astaamahani horumarsan yihiin, haddana waa wax aad u fudud oo caqli gal ah in la isticmaalo, oo waxay leedahay miirayaal maqal iyo muuqaalba leh, saamaynta dhawaaquna way fiican tahay. Ruqsadaha hal mar ayaa bilaabmaya $ 129.
Soo dejiso Tijaabinta Qulqulka shaashadda
Microphones Si Loogu Helo Tayo Caadi ah
BOYA BY-M1 waa makarafoonka clip-ka ah ee loo yaqaan 'omnidirectional clip microphone', oo ku habboon isticmaalka fiidiyowga, oo loogu talagalay taleefannada casriga ah, kaamirooyinka muraayadda leh, kaamirooyinka fiidiyowga ah, cajaladaha codka lagu duubo, PC-yada, iwm. Waxay leedahay fiilo dhererkeedu yahay 360-mitir (oo leh 6mm jack oo dahab ah) in si sahal ah loogu xiro kaamirooyinka fiidiyowga, ama taleefannada casriga ah oo aan la dhigin meel u dhow afhayeenka. Qiimaha: $ 3.5
The Sennheiser PC 8 USB waxaa lagugula talinayaa hadii aad waxbadan kudhaqaaqdo oo aad ubaahantahay inaad duubto (khaasatan shaashadda) jawiga leh dhawaq wanaagsan. Waa mid aad u fudud oo wuxuu siiyaa maqal wanaagsan duubista iyo muusigga labadaba; makarafoonka, oo u dhow afku, waa mid xasaasi ah oo ku cad soo saarista codka iyadoo la xakameynayo buuqa. Ku qalabaysan codka makarafoonka iyo xakamaynta mugga xadhigga, sidoo kale waa mid aad wax ku ool u ah xaaladaha shaqada smart. Sida iska cad, waxaa kaliya loo isticmaali karaa in lagu xiro PC / Mac oo aan loo isticmaalin taleefannada casriga ah ama kamaradaha dibadda. Qiimaha: $ 25.02
The Rode VideoMic Rycote waa makarafoonka foosto foosto oo u oggolaanaya inay ku hesho codka qaab jihada ah iyada oo aan la qaban dhawaaqyada dhinaca. Waa, sidaa darteed, doorashada qasabka ah ee darbiyada banaanka halka mowduucu aad ugu badan yahay, had iyo jeer isbeddelo (tusaale ahaan, markaad heysato 2/3 kuwa ku hadla) ama isticmaalka makarafoonka lavalier laguuguma talin sababo qurxin. Waxaa si fudud loogu dhejin karaa kaamirooyinka SLR iyo, adoo adeegsanaya adapters-ka casriga ah, waxaad sidoo kale ku xiri kartaa taleefannada ama kiniinnada loogu talagalay duubista miisaaniyadda yar. Qiimaha: $ 149.00
Agabfudud Tafatirka Video-ga
OpenShot waa tifaftire fiidiyow oo bilaash ah oo la jaan qaada Linux, Mac, iyo Windows. Waa deg deg wax barasho iyo si la yaab leh oo awood leh. Waxay ku siinaysaa labadaba howlaha aasaasiga ah ee sameynta jarista iyo hagaajinta fiidiyowgaaga, iyo sidoo kale raadad aan xadidneyn, saameyn gaar ah, kala-guur, dhaqdhaqaaq gaabis ah iyo 3D animations. Lagu taliyay haddii aad ka bilaabeysid xoqid oo aad raadineyso wax qiimo jaban oo deg deg ah inaad wax ku barato.
Tifatiraha FlexClip Video
Waa gebi ahaanba khadka tooska ah iyo barnaamijka kumbuyuutarka ku saleysan. Tifatiraha FlexClip Video wuxuu la yimaadaa dhammaan astaamaha aad u baahan tahay si aad u abuurto fiidiyowyo waaweyn, oo aan lahayn khibrad loo baahan yahay. Si toos ah ugu tafatir cutubyada dhammaan cabbirka biraawsarka adiga oo aan dhib ku ahayn soo dejinta aan habboonayn. Ma dhammaanayaan fikradaha? Baadh shaashadda qaab-dhismeedka fiidiyowga oo si buuxda loo habeyn karo oo ay sameeyeen xirfadlayaal ku habboon warshadahaaga. Waxay ka fikireen qof walba: laga bilaabo fiidiyowyada kanaalkaaga YouTube illaa fiidiyowyada waxbarashada ama tababarka. Wanaagsan haddii aad rabto inaad sameyso baaritaanno deg deg ah.
Qiimaha: freemium (dhoofinta bilaashka ah kaliya 480p, ka dibna laga bilaabo 8.99 $ / bishii); Waad aadi kartaa AppSumo si aad uhesho nooca nolosheeda markan.
Saxeex u noqo FlexClip
Shotcut waa software bilaash ah, oo lagu fulin karo Linux, macOS, iyo Windows, oo bilaash ah oo furan, kaas oo kuu ogolaanaya inaad abuurto fiidiyowyo, aad ku maamusho kuna dhoofiso qaabab badan. Interface waa dabacsan oo dareen leh. Amarada si fiican ayaa loo habeeyay, oo leh shaandhooyin badan iyo kala-guurid lagu dabaqi karo. Noocyo badan, waxay leedahay qalooca barashada wanaagsan waana fududahay in la isticmaalo. Cusbooneysiinno isdaba joog ah, soo bandhigida astaamo cusub iyo shaqeynaya, ayaa si isdaba joog ah u hagaajinaya waxqabadkeeda.
Waxay bixisaa feature a dhameystiran set sida software ganacsi. Waxay taageertaa qaabab badan oo leh qaraar ilaa 4K. Waxay bixisaa kontaroolo horumarsan oo loogu talagalay fiidiyowga iyo maqalka, saamaynta, jadwalka oo leh tafatir fara badan, iyo dhoofinta caadada oo leh dhowr astaamo la sii cayimay.
Halka Lagu Daabaco Muuqaaladaada Koorsada ee Internetka
Markaad aakhirka abuurto fiidiyowyadaada, waxaa la joogaa waqtigii loo diyaarin lahaa inay dhagaystayaashu helaan oo "ku xir" albaabbada (oo aan kaga hadli doonno qaybta xigta) oo aad ku bixinayso koorsadaada fiidiyowga. Kadib aan aragno halka aan ku daabici karno koorsooyinkeena internetka.
YouTube - Uma baahna hordhac sababtoo ah waa madal hormuud u ah adduunka fiidiyowga. Waxay leedahay interface fudud, waxay ku siinaysaa stats filim wanaagsan, iyo tan ugu fiican, waa 100% bilaash. Sidaa darteed, waa xalka ugu fiican kaliya haddii aadan haysan miisaaniyad aad ku maal gashato ama aad rabto inaad si dhakhso leh u daabacdo fiidiyow. Faa'iido darrada ayaa ah in YouTube ay ku dhejin doonto xayeysiis fiidiyowyadaada ah, taasna dhab ahaantii ma caawinayso abuuritaanka sawir xirfad leh (xitaa waxay u kaxeyn kartaa taraafikada tartamayaashaada). Marka la soo koobo: isticmaal kaliya haddii aadan haysan ikhtiyaarro kale ama haddii aad rabto inaad daaweyso kanaal YouTube ah si aad ugu adeegsato kobcinta dhagaystayaashaada si dabiici ah. Qiimuhu waa bilaash.
vimeo - Waa bedelka # 1 ee YouTube maxaa yeelay, maalgashi yar, waxay siineysaa suurtagalnimada in loo habeeyo goobo badan (gaar ahaan asturnaanta), beddelidda dejinta fiidiyowyada qaarkood ee koox, iyo wixii ka sarreeya, ma muujineyso wax xayeysiin ah. Way fududahay in la habeeyo lana maareeyo. Waa xalka ugu fiican haddii koorsadaada gaarsiinta koorsada aysan ku siineynin marti gelin bilaash ah oo aan xadidneyn, sidoo kale maxaa yeelay (sida YouTube) waxay sare u qaadeysaa tayada iyadoo la raacayo xawaaraha iyo qalabka aad isticmaaleysid. Qiimaha: bilaash (qorshooyinka istiraatiijiyadeed ee ka bilaabmaya $ 7 / bishii lagu taliyay)
Bilow Sameynta Koorsadaada Hadda!
Haddii aad ku raaxeysatay tilmaamahan qoto-dheer ee dhammaan aaladaha muhiimka ah si aad u abuurto koorso guuleysta oo khadka tooska ah (taasna run ahaantii waxay caawineysaa dhagaystayaashaada), sii faafi. Ha sugin wax intaa ka badan. Isku day inaad sameysid koorsooyinkaaga fiidiyowga ee internetka maanta.
Daah-: Martech Zone wuxuu adeegsanayaa xiriiriyeyaal ku xiran maqaalkan.
Tags: rogrogmakarafoonkamakarafoonka lavalierLoomkoorsada internetkatababarka internetkakoorsada fiidiyowga ee internetkaqalabka tababarka fiidiyowga ee internetkafurandiiwaankasawir-qaadeshaashaddaSennheisergooyomakarafoonka slrficil videosoftware editing videotifaftiraha muuqaalkamakarafoonka fiidiyowgaduubo fiidiyowtababarka fiidiyahavimeoyoutube
Hritusharma waa blogger freelancer ah, oo ku takhasusay farsamada naqshadeynta iyo barnaamijyada nashqadeynta. Waxay jeceshahay inay ka caawiso qof walba inuu noqdo naqshadeeye sida pro. Marka laga reebo inuu yahay qashin farsamo, Hritusharma wuxuu jecel yahay sameynta fiidiyowga iyo sawir qaadista.
Shaashadda Beyond: Sidee Blockchain u Saameyn Doonaa Suuqgeynta Saameynta
Daawade JSON: Qalab Bilaash ah Oo Lagu Kala Shaandheeyo Oo Lagu Eego Soosaarkaaga JSON ee API-gaaga